Ikhosi ye-3D yaseburhulumenteni-Ingcali kwimisebenzi yoluntu -iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-3D yaseburhulumenteni-Ingcali kwimisebenzi yoluntu
I-AulaGEO inikezela ngeseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi- "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokusingatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo nakwiindawo zokwakha. Yiba yingcali kwisoftware kwaye uya kuba nakho ukuvelisa umhlaba, ukubala izinto zokwakha kunye namaxabiso, kwaye udale uyilo olukhulu lweendlela, iibhulorho, imijelo yogutyulo, nokunye.
Ibiyimveliso yeeyure zokuzinikela, ukusebenza kunye nokuzama, ukuqokelela ezona datha zibalulekileyo kumxholo woBunjineli boLuntu kunye neTopographic, ushwankathela inani elikhulu lethiyori kwaye uyenze isebenze, ukuze ufunde ngokulula nangokulula. Ngokukhawuleza ngeeklasi ezimfutshane kodwa ezinesihloko kunye nokuziqhelanisa nayo yonke idatha (yokwenyani) kunye nemizekelo esiyinike apha. Ukuba ufuna ukuqala ukulawula le software, ukuthatha inxaxheba kule khosi kuya kukugcina iiveki zomsebenzi eziphanda ngokwakho oko sele sikuphanda, ukwenza iimvavanyo esele sizenzile, nokwenza iimpazamo esele sizenzile.
Thatha inxaxheba kuyilo lweendlela kunye neeprojekthi zedolophu.
Xa ujonga ebaleni, ungangenisa la manqaku omhlaba kwi-Civil3D kwaye ugcine ixesha elininzi lokuzoba.
Yenza imiphezulu yomhlaba kubukhulu obu-2 no-3 kunye nokuvelisa ukubala okufana nendawo, umthamo kunye nentshukumo yomhlaba
Yakha ulungelelwaniso oluthe tyaba kunye noluthe nkqo oluvumela uyilo lomsebenzi olayini njengeendlela, imijelo, iibhlorho, oololiwe, imigca enevolthi ephezulu, phakathi kwabanye.
Lungiselela izicwangciso zobungcali zokunikezela ngomsebenzi kwisicwangciso nakwiprofayili.
Ngaba yimfuneko okanye yimfuneko?
Ikhompyuter eneemfuno ezisisiseko zediski enzima, i-RAM (ubuncinci be-2 GB) kunye neprosesa ye-Intel, i-AMD
Ulwazi olusisiseko kakhulu lweTopografia, eyaseburhulumenteni okanye enxulumene nayo.
Isoftware yeAutoCAD Civil 3D nayiphi na inguqulelo
Le khosi yenzelwe nabani na ofuna ukufunda ukusebenzisa isoftware.
Iingcali, iiTekhnoloji okanye abaSebenzi kuVavanyo, oLuntu okanye abanxulumene nabo abafuna ukuphucula imveliso kunye nezakhono kunye nesoftware.
Nabani na ofuna ukufunda indlela yokuyila imisebenzi yomgama kunye neeprojekthi zokuhlola.
Ikhosi ye-ArcGIS Pro-ukusuka ekuqaleni ukuya phambili kunye ne-ArcPy
Ikhosi ye-Excel-amaqhinga aphambili ngeCAD-GIS kunye neMacros